Allgedo.com » 2012 » November » 06
Home » Archive Daily November 6th, 2012
Kismaayo oo lagu qabtay qof isqarxin lahaa iyo dad laga soo adeegsaday B.Xaawo
Wararka ka imaanaya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada amaanka ay ku qabteen xaafada Farajano Nin doonayay inuu isqarxiyo. Ninkan la qabtay ayaa ku hubaysnaa waxyaabaha qarxa gaar ahaan jaakad iyadoona ciidamada ay ku qabteen halka loo yaqaan Waqda. Sargaal katirsan ciidamada amaanka ayaa AOL usheegay in Ninkan oo ah wiil dhalinyaro ah xabsiga ladhigay haatana ay...
Dr Gaas oo safarkiisii Puntland ka warbixiyay + Warbixin Xasaasi ah
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas oo Shir Jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo uganawarbixiyey socdaalkiisii Gobollada Puntland. (Galkacyo, Soomaaliya 05 November 2012) Waxaaa maanta shir-Jaraa’id ku qabtay hoyga uu ka daganyahay Magaalada Gaalkacyo Mudane Cabdiweli Maxamed Cali-Gaas oo ahaa Ra’iisul Wasaarihi hore ee Soomaaliya haddana ah Xubin kamid ah Xildhibaanada Federaalka Soomaaliya. Mudane Cabdiweli...
Meydka Ruux qoorta laga jaray oo lagu arkay Boosaaso
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in la arkay meydka Nin qoorta laga jaray. Ninkan oo kamid ahaa dadka deegaanka ayaa meydkiisa laga helay xaafada Buulo Mingis ee magaaladda Boosaaso sida AOL ay usheegeen dad kusugan magaaladda. Lama Oga kooxdii ka danbaysay dilkaas hase ahaatee dad aan lahadalnay waxaa ay sheegeen in kooxdii dilka gaystay ay goobta...